Ingqungquthela yesine yokuheha abatshalimali ivuselele ithemba kakhulu, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Loku ngikusho ngezizathu ezimbili: Ibihlelwe kahle futhi yaphathwa kahle. Okubaluleke kakhulu kodwa bekukhona isimo esingcono sokuyindlalela ngenxa yezinguquko ezinqala ezenziwe.
Ngasho ngaphambi kwengqungquthela ukuthi ukutshala imali kudinga imigomo emihle kahulumeni, hhayi izingqungquthela okuzophoqwa izinkampani ukuthi zizibophezele ukutshala imali, into esuke ivele izokwenzeka.
Ingqungquthela ikwazile ukugqamisa ukutshala imali okukhulu okwenzeka ezweni, okusizayo ukwenza ngcono isimo. Kepha okusizile kakhulu wukubhunga nokuvuma izinselelo okwenziwe wumengameli. Akambambathanga ngezinkinga zethu, akazithathanga kancane; kusuka ebugebengwini, inkohlakalo kuya ezingeni eliphezulu labantu abangasebenzi. Ukungagwegwesi kwenze wathembeka okwenziwe wukubona kwakhe okucacile ukuthi izinkampani ezizimele nazo zibalulekile ukuxazulula lezi zinkinga. Lona nguhulumeni osibonayo isidingo sokungagwegwesi kulesi simo esibhekene naso.
Izinguquko ezenziwe yinto ebambekayo osomabhizinisi abangasho ukuthi “loku kuyasikhuthaza ukutshala imali”. Ukudayisa i-spectrum okubeyimpumelelo (uma singazinaki izinselelo zomthetho) okugoqwe sekusele isonto kube yingqungquthela yisibonelo esihle. Kuzokwenza izinkampani zamaselula ziqale ukutshala imali obesekubambezeleke cishe iminyaka engaphezu kwewu-10 ngenxa yesidididi ngomgomo.
Izinguquko eMthethweni wokuLawula uGesi ukuze kuvumeleke izinkampani ukuthi zakhe izindawo zokuphehla ugesi ezifika ku-100MW ngaphandle kwelayisense zinhle kakhulu noma loku kusengozini yokubukelwa phansi wubuholi obubekwe wumlawuli wamandla okubhalisa umsebenzi.
Umengameli ukhulume kakhulu ngesidingo sokusebenzisana kwemikhakha ezimele nekahulumeni. Ngiyavumelana naloko. Thina Business Leadership South Africa (eBLSA) sihlale sizibophezele ekusebenzisaneni kahle nomphakathi ukwenza ukutshala imali kwinqalasizinda. Kepha akumele singakunaki ukuthi ukutshala imali okukhulu ezweni elinjengaleli lethu kwenzeka kuphela uma izigidi zabantu zibona kufanele ukufaka imali yazo engozini ngokutshala imali. Akuyona into umuntu oyedwa angayilawula kodwa yinto eyenzeka uma kunemigomo efanele nesimo somnotho esikhuthazayo.
Okwamanje siyahlomula emananini aphezulu okumbiwa phansi emhlabeni. Loko yinhlanhla nje. Kodwa ukutshala imali akukho – abavukuzi nabanye abenza inzuzo ngenxa yamanani aphezulu abayisebenzisi inzuzo yabo ukwandisa umsebenzi wabo. Kungani? Kungenxa yokuthi imigomo yezwe abayithembi. Abazi noma izinguquko zokulawula eziyobekwa esikhathini esizayo ziyoyithinta yini inzuzo abayobe beyenze ngaloko kutshala imali.
Kuloku isinqumo esiphusile wukunikeza imali abanikazi bezabelo. Yingakho udinga inqubomgomo eqondile nemibandela yomnotho emihle ukuze kubenokutshala imali. Abantu badinga ukuba nethemba lokuthi isimo somnotho sizoba sihle nendawo abazosebenzela kuyona izoba yinhle. Uma kungekho loku, ngeke bazame inhlanhla.
Ngiyakholwa wukuthi imizamo kamengameli isiqala ukushintsha loku. Kepha kumele siloku siyifakile ingcindezi. Kumele sithole izindawo zezinguquko ezizokwenza ngcono okulindelekile. Izimayini nezokuthutha impahla esingaqala ngazo.
Akwehli kahle ukuthi izikhungo zethu zibalwa nezibizayo emhlabeni. Ojantshi bethu bezitimela bayabiza futhi abathembekile. Ziningi izindlela okungalungiswa ngazo loku, ikakhulu uma uhulumeni esebenzisana nezinkampani ezizimele.
Ithemba lami linyukile, ngenxa yengqungquthela yangesonto elidlule. Kukhona inqubekelaphambili. Kunomoya omuhle wokusebenzisana phakathi kukahulumeni nezinkampani ezizimele, nesivumelwano – esisesigabeni sobengameli – ngokumele kwenziwe.
Inselelo yethu isamile ekutholeni izinkampani ezizimele ziphelele ukuthi zisebenzisane zigxile ekufezeni izinjongo. Ngaloku nginomdlandla wokusebenzisana nabalingani bethu emphakathini ukuqinisekisa ukuthi kuyenzeka loku.
I-BLSA iyakuthakasela ukuxegisa imithetho ye-COVID-19, ikakhulu uma kubuthene abantu. Kepha-ke isinqumo sokugcina imigomo emisebenzini yamabhizinisi siyadida. Amabhizinisi kumele ngabe asebenza engaphazanyiswa yilutho uma ubuka isimo somnotho wethu namazinga aphezulu okushoda kwemisebenzi.
Ukudayisa i-spectrum kube yimpumelelo, kwenziwa imali cishe ephindaphindiwe kwebilindelwe, uR14.4 billion, kutshengisa ukuthi izimakethe zingaba namandla kakhulu kangakanani. Yizindaba ezinhle lezi kwabafisa ukutshala imali eNingizimu Afrika. I-National Energy Regulator of South Africa idinga ukuxazulula ukugunyaza izinqubo okunzima futhi okungenzeki bese isusa imidanti evimba abafuna ukukhiqiza ugesi ongaphansi kuka-100MW.